Ukusetshenziswa kwama-Vitamins nama-Minerals
Kungani Abantu Bethatha Izidakamizwa
1.‎1 FUNDA: Kungani Abantu Bethatha Izidakamizwa
Izidakamizwa Zithinta Kanjani Ubuchopho
2.‎1 FUNDA: Izidakamizwa Zithinta Kanjani Ubuchopho
Ukusiza Othile Aphume Kwizidakamizwa
3.‎1 FUNDA: Ukusiza Othile Aphume Kwizidakamizwa
4.‎1 FUNDA: Ukusetshenziswa kwama-Vitamins nama-Minerals
Izinqubo Zokusiza Ukuhoxiswa
5.‎1 FUNDA: Izinqubo Zokusiza Ukuhoxiswa
6.‎1 FUNDA: Uhlelo lwe-Purification
Ukwenza Ukululama Ngokugcwele
7.‎1 FUNDA: Ukwenza Ukululama Ngokugcwele
8.‎1 FUNDA: Indlela Ephumayo
9.‎1 Izidakamizwa Nobuthi
9.‎2 Imiphumela Yokusetshenziswa Kwezidakamizwa
9.‎4 Ama-Objective Processes
9.‎5 Siza Umuntu Osebenzise Izidakamizwa
true drugs /zu-ZA/tools-for-life/drugs/steps/why-people-take-drugs.html read 4 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/drugs_zu_ZA.jpg Izimpendulo Kwizidakamizwa
4.‎1 FUNDA LENDATSHANA
Ama-vitamins kanye nama-minerals anikezwa umuntu owomayo (ophuma ezidakamizweni) ukuze kwenze ukuthi ayeke izidakamizwa nokungaphatheki kahle okuncane.
Ama-vitamins kanye nama-minerals asetshenzisiwe kanye namanani ngayinye abhalwe ngezansi. Banikezwa ngamanani aqondile.
Kulokhu okulandelayo, i-IU imele i-International Unit, isilinganiso senani lezinto ezinjengama-vitamins.
Ama-milligram ayi-1,000 e-niacinamide
I-5,000 IU ka-vitamin A
I-400 IU ka-vitamin D
800 IU ka-vitamin E
Ama-milligrams awu-2 000 we-vitamin C
Ama-milligrams awu-500 we-magnesium carbonate
Ama-milligrams awu-25 we-B6
Ama-milligrams awu-200 we-B complex
Ama-milligrams awu-300 we-B1
Ama-milligrams awu-100 we-pantothenic acid
Kubalulekile ukuthi i-niacinamide isetshenziswe, hhayi i-nicotinic acid (eyaziwa ngokuthi yi-niacin).
Ama-vitamins kanye nama-minerals angenhla kufanele anikezwe amahlandla amane ngosuku, cishe njalo ngamahora ayisithupha, isikhathi sonke umuntu eyeka izidakamizwa.
Anikezwa ndawonye, ​​okungukuthi, ngasikhathi sinye.
Akufanele athathwe esiswini esingenalutho njengoba lokhu kungadala ukushiswa kwesisu. Kufanele zithathwe ngemuva kokudla noma, uma zithathwa phakathi kokudla, nge-yoghurt.
Enganikezwa nobisi olunama-amino acids oluyimpuphu ukuwehlisa phansi.
Imininingwane engenhla inikezwe ngoba ama-vitamins kanye nama-minerals kumele anikezwe ngendlela engeke yonakalise isisu. Ukonakalisa kusho ukuguga kancane kancane.
Ama-vitamins kufanele abe ezibhebheni “ezi-enteric coated,” okusho ukuthi ukuvikela amathumbu kufanele kube semaphilisini ukuze ancibilike kancane. Lokhu kusiza ukuvikela isisu.
Uma ama-vitamins kanye nama-minerals enikezwa ngaphandle kokudla noma i-yoghurt njengoba kuchaziwe ngenhla, umuntu (a) angazizwa egcwele kakhulu ngemuva kokudla, (b) aphathwe isisu, (c) abe nomuzwa ovuthayo, (d) ingaphandle lesisu lingaba buhlungu.
Uma imiyalo engenhla ilandelwa, akukho (a) kuya ku-(d) kwemizwa okufanele kwenzeke. Uma umuntu ekhononda ngawo, yeka ukumnika ama-vitamins kanye nama-minerals. Amacwecwe e-aluminium hydroxide ahlafunwa futhi agwinywe nobisi isikhathi ngasinye lapho imizwa iqala kuzosikhulula isisu. Ama-amino acid ayimpuphu, i-yogurt nobisi kumele kunikezwe kuze kube yilapho isisu sesingcono. Ama-vitamins kanye nama-minerals engaqalwa kabusha.
Ukungakhululeki nezinhlungu zokuhoxa ziyisizathu esikhulu sokwehluleka ukuzama ukwenza umuntu ayeke izidakamizwa. Izinzuzo zama-vitamins kanye nama-minerals ngesikhathi komile zinkulu kakhulu kunama-drawbacks angenzeka.
Ukunika umuntu ama-minerals e-calcium kanye ne-magnesium nakho kusiza ngokuhoxiswa.
Umuntu ozama ukudlula ekuhoxeni ngaphandle kosizo angaba nokudlikizela (ukushukuma okunobudlova komzimba kanye nemilenze), ama-spasms (ngokuzumayo, ukunyakaza okungalindelekile komsipha okwenza ukuba uqine futhi kube buhlungu) kanye nokuhlasela okubi kakhulu kwemizwa.
Ama-spasms angalethwa wukuntuleka kwe-calcium. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kwehlisa inani le-calcium emzimbeni.
Ama-nervous reactions angenzeka ngokuntuleka kwe-magnesium. I-magnesium igudluza izinzwa futhi inenzuzo ekuvimbeleni imisipha ebuhlungu.
I-calcium ayingeni kalula kusixazululo emzimbeni futhi umzimba awuyisebenzisi ngaphandle kokuthi iyi-acid. Ngakho ke kwatholakala indlela yokuthola i-calcium ukuze ibe ikhambi emzimbeni kanye ne-magnesium. Lokhu kwenziwa ngokufaka i-vinegar enikeza i-acid edingekayo.
Imiphumela ezuzisayo yawo womabili ama-minerals ingafezeka.
I-solution esisetshenziswayo ibizwa “ngeFomula ye-Cal-Mag.” I-Cal-Mag inikeza ama-minerals e-calcium ne-magnesium aswele kumuntu owayesebenzisa izidakamizwa. Kutholakale kusebenza kakhulu ekusizeni ukusingatha i-muscular spasms kanye nama-nervous reaction okungenzeka ngenxa yokuhoxiswa kwezidakamizwa.
Izithako ngeFomula ye-Cal-Mag zibhalwe ngezansi ukukusiza uqiniseke ukuthi unohlobo olufanele lwesithako ngamanani afanele.
Ifomula isebenzisa ingxenye eyodwa ye-magnesium engaxutshiwe izingxenye ezimbili ze-calcium elemental, exutshwe uviniga emanzini. Nge-elemental kusho ukuthi ayihlanganisiwe namanye amakhemikhali.
Ifomula isebenzisa lama-compounds alandelayo: i-calcium gluconate ne-magnesium carbonate. I-compound inani lezinto ezahlukahlukene ezihlanganisiwe ndawonye.
Womabili ama-compound eza ngefomu elimhlophe, eliyimpuphu. Ngayinye yakhiwe ngezinto ezihlukile. I-calcium gluconate iqukethe ezinye izinto ngaphandle kwe-calcium; akuyona yonke i-calcium emsulwa, kepha iqukethe kuphela iphesenti le-calcium emsulwa. Ngokufanayo, i-magnesium carbonate iqukethe ezinye izinto ngaphandle kwe-magnesium futhi ifaka iphesenti nje le-elemental magnesium.
Ukuba nenani elifanele le-elemental magnesium nenani elifanele le-elemental calcium kubaluleke kakhulu kumalungiselelo ngeFomula ye-Cal-Mag. Kepha awusebenzisi i-magnesium emsulwa noma i-calcium emsulwa lapho wenza i-Cal-Mag. Sebenzisa kuphela i-calcium gluconate ne-magnesium carbonate.
I-Cal-Mag inikezwa umuntu owomayo kanye nama-vitamins nama-minerals achazwe ekuqaleni. (Akudingeki ukuthi kunikezwa ngasikhathi sinye.)
I-magnesium compound efanelekile ye-Cal-Mag ibizwa ngokuthi yi-magnesium carbonate basic. Iqukethe cishe amaphesenti awu-26 we-magnesium. (Le-compound kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi yi-magnesium alba.)
Kunezinhlanganisela ezihlukile ze-magnesium ezinamaphesenti ahlukile we-elemental magnesium, kepha ukusebenzisa noma yiluphi olunye uhlobo kunokunconywa lapha kuzonikeza amanani ahlukile we-magnesium futhi ngeke kunikeze ngamanani afanele. Kufanele kube yingxenye eyodwa kwisilinganiso se-magnesium kufinyelela kwinani le-calcium.
Kuyi-magnesium carbonate eyisisekelo esetshenziswa ekwenzeni i-Cal-Mag. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi i-magnesium carbonate basic esetshenziswayo isha, ayigugile, futhi iyimpuphu “elula” hhayi “esindayo.”
Kukhona uhlobo olulodwa kuphela lwe-calcium gluconate compound futhi amaphesenti ayisishiyagalolunye aleyo-compund ayi-calcium. Ngakho ke akufanele ube nobunzima bokukhetha i-calcium gluconate efanelekile ye-Cal-Mag.
Izithako zingatholakala ezitolo eziningi zokudla kwezempilo noma lapho kuthengiswa khona ama-vitamins.
Faka ukhezo olulodwa lwezinga (i-15 ml) ye-calcium gluconate engilazini evamile.
Faka ukhezo lwamazinga awu-½ (2,5 ml) we-magnesium carbonate.
Faka ukhezo olulodwa (15 ml) lweviniga ye-cider (okungenani amaphesenti amahlanu e-acidity).
Faka ingilazi ewu-½ (cishe u-120 ml) wamanzi abilayo ugovuze kuze kube yilapho yonke impuphu incibilikile futhi kucacile uketshezi. (Uma lokhu kungenzeki, kungahle kusuka kwikhwalithi embi noma i-magnesium carbonate yakudala.)
Gcwalisa okusele kwingilazi ngamanzi afudumele noma abandayo bese uyimboza.
Isixazululo sizosigcina kuze kufike ezinsukwini ezimbili.
Ungenza inani elikhudlwana ngasikhathi sinye ngokuphindaphinda zonke izithako njengoba kudingeka.
Kungenziwa ngendlela engafanele ukuze kungancibiliki. Umehluko kusuka kokungenhla ukhiqiza ingxube engaphumelelanga enganambitheka kabi.
(Qaphela, futhi, ukuthi ingxenye eyodwa ye-magnesium kuya kwizingxenye ezimbili ze-calcium elemental ziyadingeka. Uma umuntu efuna ukukwenza lokhu ngokunembile, umuntu angakwazi ukwenza amanani a-elemental. Ifomula engenhla inikezwe inani le-compound.)
Ukusuka kwengilazi eyodwa kuya kwezintathu ngosuku, nokudla noma ngemuva kokudla, kuthatha indawo yanoma yisiphi isidambisi. Akukhiqizi imiphumela e-drugged yezidakamizwa.
Izitolo eziningi zokudla zezempilo ziphethe amalungiselelo e-calcium ne-magnesium okulungiselelwe ngaphambilini. Ngaphambi kokusebenzisa noma yikuphi kwalokhu endaweni ye-Cal-Mag, umuntu kufanele afunde ilebula ukubona ukuthi i-calcium ne-magnesium inikezwe ngokulingana okuyikho nokuthi ahlole ukuthi iqukethe i-acid (njenge-ascorbic acid noma i-citric acid). Ngaphandle kwalokho, amalungiselelo anjalo awasizi ngalutho futhi ngeke anikeze imiphumela efanayo ne-Fomula ye-Cal-Mag.